Akụkọ Bible: Mgbe Nwata Bụ́ Jizọs Nọ n’Ụlọ Nsọ - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
LEE nwata nwoke a ka ọ na-agwa ndị okenye a okwu. Ha bụ ndị nkụzi n’ụlọ nsọ Chineke nke dị na Jeruselem. Nwata nwoke a bụ Jizọs. O tolitetụwo. Ọ dị afọ iri na abụọ ugbu a.
Ọ na-eju ndị nkụzi a anya na Jizọs maara ihe dị ukwuu banyere Chineke na ihe ndị e dere n’ime Bible. Ma gịnị mere Josef na Meri anọghị n’ebe a? Olee ebe ha nọ? Ka anyị chọpụta.
Kwa afọ, Josef na-eduru ezinụlọ ya eje Jeruselem maka ememe pụrụ iche a na-akpọ Ememe Ngabiga. O tere ezigbo aka isi Nazaret gaa Jeruselem. Ọ dịghị onye nwere ụgbọala, ụgbọ okporo igwe adịghịkwa. E nweghị ha n’oge ahụ. Ọtụtụ mmadụ na-eji ụkwụ aga, ọ na-ewekwa ha ihe dị ka ụbọchị atọ iru Jeruselem.
Ezinụlọ Josef buru ibu ugbu a. N’ihi ya, e nwere ụmụnne Jizọs ndị ikom na ndị inyom a ga-elekọta anya. N’afọ ahụ, Josef na Meri na ụmụ ha mere ogologo njem na-alaghachi Nazaret. Ha chere na Jizọs so ndị ọzọ na-ala. Ma, mgbe ha kwụsịtụrụ n’oge chi jiri, ha ahụghị Jizọs. Ha chọrọ ya n’etiti ndị ikwu ha na ndị enyi ha, ma o soghị ha! Ha wee laghachi Jeruselem ịchọ ya ebe ahụ.
N’ikpeazụ, ha chọtara Jizọs n’ebe a n’etiti ndị nkụzi. Ọ na-ege ha ntị, na-ajụkwa ha ajụjụ. Amamihe Jizọs tụkwara ha niile n’anya. Meri wee sị ya: ‘Nwa m, gịnị mere i ji mee anyị otú a? Mụ na nna gị anọwo na-echegbu onwe anyị, na-achọgharị gị.’
Jizọs zara ha, sị: ‘Gịnị mere unu ji na-achọ m? Ùnu amaghị na m ghaghị ịnọ n’ụlọ nna m?’
Ee, Jizọs nwere mmasị ịnọ ebe ọ ga-amụta ihe banyere Chineke. Nke a ọ́ bụghị otú o kwesịrị ịdị anyị? N’obodo ha bụ́ Nazaret, Jizọs na-eje nzukọ kwa izu iji fee Chineke ofufe. Ọ mụtara ọtụtụ ihe n’ime Bible n’ihi na ọ na-ege ntị mgbe niile. Ka anyị dị ka Jizọs ma na-agbaso ihe nlereanya ya.
Luk 2:41-52; Matiu 13:53-56.
Afọ ole ka Jizọs dị na foto a, ebeekwa ka ọ nọ ihe a?
Gịnị ka Josef na ezinụlọ ya na-eme kwa afọ?
Ka ha mesịrị njem ruo otu ụbọchị n’oge ha na-ala, n’ihi gịnị ka Josef na Meri ji laghachi Jeruselem?
Ebee ka Josef na Meri chọtara Jizọs, n’ihi gịnịkwa ka ndị nọ n’ebe ahụ ji na-enwe ihe ijuanya?
Gịnị ka Jizọs gwara nne ya, bụ́ Meri?
Olee otú anyị pụrụ isi dị ka Jizọs n’ịmụ banyere Chineke?
Gụọ Luk 2:41-52.
N’agbanyeghị na iwu kwuru na ọ bụ naanị ndị ikom kwesịrị ịga ememe ndị a na-eme kwa afọ, ezi ihe nlereanya dị aṅaa ka Josef na Meri setịpụụrụ ndị nne na nna taa? (Luk 2:41; Deut. 16:16; 31:12; Ilu 22:6)
Olee otú Jizọs si setịpụrụ ndị na-eto eto taa ezi ihe nlereanya n’ido onwe ha n’okpuru ndị mụrụ ha? (Luk 2:51; Deut. 5:16; Ilu 23:22; Kọl. 3:20)
Gụọ Matiu 13:53-56.
Olee ndị ikom otu nne ji ha na Jizọs bụ́ ndị a kpọrọ aha ha n’ime Bible? Oleekwa otú e si jiri mmadụ abụọ n’ime ha mee ihe n’ọgbakọ Ndị Kraịst ka oge na-aga? (Mat. 13:55; Ọrụ 12:17; 15:6, 13; 21:18; Gal. 1:19; Jems 1:1; Jud 1)
Josef na Meri chị obi n’aka n’ihi na ha ahụghị Jizọs. O jukwaranụ Jizọs anya na ha amaghị ebe ha ga-achọta ya.